Ankazoabo atsimo Olona telo maty notapahin-doha
Mihorohoro ny mponina ao amin’ny distrikan’Ankazoabo atsimo amin’izao fotoana izao. Olona 3 no maty notapahin-doha, ka vehivavy ny iray ary lehilahy ny 2 tamin’ireo.
Camera de surveillance Mitaky fitoriana ny fanenjehana jiolahy amin’ny zava-misy
Efa ezahan’ny fitondram-panjakana rakofana «caméra de surveillance» eto an-drenivohitra,
Vola sandoka 580 000 ariary Mila hamarinina ireo mari-bola 20 000 ariary
B98570831 sy B98570849 ary B98570850 no laharana vola sandoka izay mipariaka avy any Ambositra.
Nitrangana fakana an-keriny sy fandrahonana mantsy teo Ampefiloha ny herinandro lasa teo. Manoloana ny Lisea moderna Ampefiloha na LMA no tonga nanery ny raim-pianakaviana iray hanaraka azy ny tovolahy telo, sahabo ho tamin’ny 6 ora sy sasany ny harivan’ny 6 aogositra teo.
Nisaron-tava avokoa ireo olon-dratsy ka tsy fantatry ny manodidina. Norahonan’izy ireo ho faty ilay lehilahy, araka ny fampitam-baovaon’ity farany, raha tsy manao sonia antontantaratasy. Fikasana fakana an-keriny ny taniny sy ny fananany maro no votoatin’izao fanerena hanatanteraka rangopohy izao.
Ankoatra ny anaran’ireo mpanery hanao sonia, misy anarana hafa ihany izay olona mitana andraikitra ambony eto amin’ny firenena koa tao anaty taratasy, raha ny fampitam-baovaon’ny lasibatra sy ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana. Nentin’ireo jiolahy nihiboka teny Ankorondrano izy ary ny ampitso maraina tamin’ny 7 ora vao navotsony.
Voasambotry ny mpitandro filaminana ny roa tamin’ireo mpaka an-keriny, taorian’ny fikarohana sy ny asa fitsikilovana notanterahin’ny zandary. Mbola karohina ireo mpiray tsikombakomba amin’izy ireo, indrindra ny atidoha nikotrika ny kidnapping. Ao anatin’ny fanadihadiana sy ny famotorana tanteraka ny mpitandro filaminana, raha ny resaka nifanaovana tamina tompon’andraikitra iray.